Uyifumana njani indawo yoqobo yendlela emfutshane (alias) kwiMac | Ndisuka mac
Uyifumana njani indawo yoqobo yendlela emfutshane (alias) kwi-Mac
Iindlela ezimfutshane zibe sisixhobo esingasebenziyo kwiiMacs, enkosi kukhetho lokufikelela olunikezelwa yiLaunchpad, iDock kunye nokuKhanya. Kodwa ukuba ungumsebenzisi osebenzise iWindows kangangeminyaka emininzi, kunokwenzeka ngakumbi ukuba iindlela ezimfutshane, ezibizwa ngokuba ziiAliases kwiMacOS, zizinto ezingenakuthethathethana. Kwinqaku lam elidlulileyo ndikubonise indlela ekunokwenzeka ngayo ukuba ungene ngokuthe ngqo kuyo nayiphi na ifayile okanye usetyenziso, ukuyibeka kwidesktop ye-Mac yethu okanye nakweyiphi na enye indawo apho kufaneleke ngakumbi ekusebenziseni esiza kukunika yiyo.
Ixesha elingaphezulu, sinokuthi singazi ukuba ikho phi ifayile yoqobo, enokusinyanzela ukuba sisebenzise i-Finder ukuze fumana indawo yoqobo yefayile. Nangona sinakho ukusebenzisa indlela esikubonisa yona apha ngezantsi, indlela eya kuthi isise ngaphezulu komzuzwana.
Fikelela kwindawo yoqobo ye-alias / indlela emfutshane
Ukufikelela kwindawo yoqobo ye-alias kubalulekile ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi ngeefayile, kuba ii-aliases / iindlela ezimfutshane zizizo nje, iindlela ezimfutshane, ayinalo ulwazi.
Kwindawo yokuqala kwaye njengenyathelo elidlulileyo lokuba nakho ukufumana indawo yoqobo apho ifayile sinokufikelela ngqo / kwi-alias ekhoyo.
Emva koko kufuneka siye kwindlela emfutshane kwaye ucofe kwiqhosha lasekunene ukuvula imenyu ehlayo.
Ngaphakathi kukhetho oluvela kwimenyu, kufuneka ukhethe i-Show yoqobo.
Okwalo mzuzu, iwindow ye-Finder iya kuvula kunye nendawo apho ifayile ebesikhe sayenzela indlela emfutshane ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyifumana njani indawo yoqobo yendlela emfutshane (alias) kwi-Mac
Ukusuka kwisandla sika-Aspyr umdlalo: Ubizo lomsebenzi: Imfazwe yanamhlanje 3 ifika kwiVenkile ye-Mac App